Ogaden News Agency (ONA) – Faraca Barsan ee Jaaliyada Garisa oo Maamul Doortay + Sawiro
Faraca Barsan ee Jaaliyada Garisa oo Maamul Doortay + Sawiro
Posted by Dayr	/ October 24, 2015
Waxaa magaalada garissa ee caasimada Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya si habsami leh uga furmay shir ay si wanaagsan u soo Abaabuleen FARACA BARSAN ee Jaaliyada Somalida OGADENIA, Shirkan oo ahaa Doorashadii sanadlaha ahayd ayaa maamul cusub oo hogaamindoona Jaaliyada sanadka 2015-2016 ay ku doorteen xubnihii halkaasi kasoo qaybgalay.
Shirkan ayaa waxaa furay Gudoonkii xilka ka dhamaaday ee faraca mudane Maxamed Caafi, Waxaana Sida cadaada ahayd shirka, lagu furay aayaadka Quranka Kariimka iyo Wacdi diini ah. Sidoo kale waxaa Warbixin meelo badan taabanaysa kasoo jeediyay mudanaal fara badan, kuwaasoo sharaxaad dheer ka bixiyay Howlaha Halganka, dagaaladii ugu danbeeyay ee Ogadenia ka dhacay,waxqabadkii iyo Howlahij shaqo ee Gudiga sanadkii ay xilka hayeen soo qabteen.
Sidoo kale Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay marti sharaf ka socday Deeganka Garissa. Dhankale waxaa Marti ku ahaa shirka, kana soo jeediyay Khudbad Aad uu qiima badan Halgame Qorane oo kamid ah halgamayaasha OGADENIA ee Naf iyo maalba u huray halganka, hadana kasoo kicitimay cariga Maraykanka. Halgame Qorane ayaa shacabka Somalida Ogadenia uga warbixiyay wadanka uu ka yimid jaaliyadka Ogadenia ee qurbaha ku sugan, xaalada dalka Ogadenia.
Waxaa hawsha lawareegay Gudig doorashada oo uu hogaamin hayay mudane Maxamed Adan, Waxaana laguda galay, soo dhigida xubnaha Hogaamindoona jaaliyada Ogadenia ee Magaalada Gaarisa. Waxaana bilaabatay cod bixin waxaana halkaasii lagu soo doortay Gudigii Cusbaa ee Jaaliyada Barsan Magaalada Garissa oo ka Koobnaa Todobo xubnood.
Waxaana codbaahiyaha lagusoo dhaweeya Gudoonka cusub ee jaaliyada oo Khudbad gaban halkaas ka soo jeediyay, Shirkan ayaa ku soo dhamaday Guul iyo farxad aad uu balaadhan ooy muujiyeen kasoo qabgalayaasha, Martida iyo dhamaan jaaliyada reer Ogadenia.